As of 2019-07-23 11:02:51
NICA:463.00 (20)( 0.00) DHPL:72.00 (10)( 3.00) SMFBS:517.00 (10)( 24.00)
सिभिल बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २४ चैत २०७५)
बैंकले यसअघिका २ वर्षको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्न बाँकी छ । कम्पनीले दुवै वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म साधारणसभा गर्ने सूचना भने सार्वजनिक गरेको छैन । दुवै आर्थिक वर्षको साधारणसभा संयुक्त गर्ने प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको जानकारी बैंकले दिएको छ । सिभिलले आव २०७३/७४ का लागि १० दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर तथा शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत नगद लाभांश र आव २०७४/७५ का लागि ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा रू. ३५ करोड ९७ लाख १५ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
यस अवधिमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. २३ करोड ९८ लाख ८ हजार रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रस्तावित बोनस शेयर पारित हुन बाँकी हुँदै कम्पनीले बोनसलाई समेत पूँजीकृत गरिसकेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बोनस पूँजीकृत भएपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ३३ लाख ९० हजार पुगेको छ ।
2019-04-07 - 97 view(s) - abhiyan